मेकोong्ग डेल्टाको सुन्दरता पत्ता लगाउनुहोस् यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | के हेर्ने, भियतनाम
El माक्को यो दक्षिणपूर्व एशियामा एक धेरै महत्त्वपूर्ण नदी हो र यो महाद्वीपको सबैभन्दा लामो नदी हो। यो धेरै देशहरू पार गर्दछ तर डेल्टा के भित्र छ? भियतनामयो बिन्दु जुन समुद्रमा खाली हुन थाल्छ, विशेष सौन्दर्यको हो।
प्रकृति र यसका अचम्मका प्रेमीहरूका लागि यो क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो हजारौं प्रजातिहरूको जनावर, बोटबिरुवा र माछाको घर हो। विविधता मूर्खतापूर्ण छ र यदि यसलाई जोड्न सकिन्छ कि यसले हजारौं बर्षदेखि बसोबास गर्ने देशहरूलाई पार गर्छ, यसको प्राकृतिक महत्त्वले यसको सांस्कृतिक महत्त्व थप गर्दछ। हामी दुबै पत्ता लगाऔं।
1 मेकोong्ग नदी
2 अद्भुत मेकोong्ग डेल्टा
यो एशियामा सब भन्दा व्यापक एक हो र यसको अनुमानित लम्बाई छ ,4.350००,००० किलोमिटर तिब्बती मैदानहरूमा उनको जन्म पछि। तपाइँको यात्रा भर चीन, म्यानमार, लाओस, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया हुँदै अन्तमा भियतनाम पुग्छ जसको किनारबाट यो समुद्रमा बग्दछ। त्यसपछि नदीको उपयोग र अस्तित्व एक संयुक्त कार्य हो।
नदी बेसिन चिनियाँ तिब्बतमा अवस्थित माथिल्लो बेसिन र युनान प्रान्तमा रहेको तल्लो बेसिनमा विभाजित छ। यो लामो सडक पछि छ कि यसले दक्षिण चीन सागरमा भियतनामी मुलुकहरूमा यस जटिल र आकर्षक डेल्टामा खाली गर्दछ। यो एक नदी हो धेरै सिकार संग, केहि अझै निर्माणाधीन छन्। दर्जनौं, वास्तवमा, र ती मध्ये धेरैले देखाउँदछ बिजुली उर्जा।
को शर्तहरु जैविक धन यो केवल अमेजनले पार गरेको हो। यो अनुमान गरिएको छ कि यसमा २० हजार प्रजातिहरूको बोटबिरुवाहरू छन्, केवल हजार प्रजातिहरूको चराहरू, 20०० प्रजातिका सरीसृप, 800० विशेष स्तनपायी र धेरै उभयचरहरू fresh430० प्रजातिका ताजा पानीको माछाको अलावा। यो सुपर बायोडाइभर छ। तर मेकोong्ग नेभिगेट गर्ने के गर्ने?
यो एक नाविक नदी हो शताब्दीयौंसम्म र यसको तटहरू शहरहरूमा, गाउँहरू र शहरहरू जहिले पनि निर्माण गरिएको छ। आज पनि माछा मार्ने गाउँहरू भेट्टाउन सकिन्छ जुन एशियाको यस भागसँग जोडिएको व्यापार मार्गहरूको प्रयोग गरेर निरन्तर हिडिरहन्छ।
अद्भुत मेकोong्ग डेल्टा
अवस्थित छ हो ची मिन्ह शहरको पश्चिम, प्राचीन साइगोन। भियतनामी डेल्टाको धेरै दृश्यहरू छन् तर सामान्यतया सबैभन्दा क्लासिक पोष्टकार्ड दक्षिणमा बाढी भूमि र पश्चिम र उत्तरमा केही नरम पहाडाहरू हो, यो टेक्टोनिक क्रियाकलापको उत्पादन जब 50 करोड वर्ष अघि युरेसियन र भारतीय प्लेटहरू आपसमा भेटघाट हुन्छन्। पछाडि
डेल्टा दुई ठूला च्यानलहरुबाट बग्छ, दुबै पूर्व समुद्रमा डिस्चार्ज हुन्छन्। यो देशको सब भन्दा सानो वन क्षेत्र पनि हो, Thousand०० हजार हेक्टेयर र यी सबै निस्सन्देह जलवायुलाई असर गर्दछ र एकै समयमा यसबाट प्रभावित हुन्छ। डेल्टा को एक क्षेत्र हो कम उचाई त्यसैले यो धेरै छ बाढीको खतरा समुद्रको सतह बिरलै बढ्छ। यसको फलस्वरूप, समुद्री तटवर्ती इलाकाहरूमा बढी क्षार उत्पन्न हुन्छ र स्पष्टतया, सरकारले गरेका उपायका लागि चिन्ताले यस अवस्थाका नकरात्मक नतिजाहरूको प्रतिरोध गर्दछ।
सत्य यो हो कि धेरै पर्यटक यी परिदृश्यमा आकर्षित छन्। हनोईलाई स्कोर गर्नका साथै होइ एन र सपा प्राय: लक्षित गर्दछन् मेकोong्ग डेल्टा सूचीमा ... के यो यसको लायक छ? के ती र colorful्गीन अस्थायी बजारहरूको दर्जनौं फोटोहरू वास्तविकतासँग मेल खान्छ? हुदै हैन। डेल्टा सामान्यतया भियतनामको बाँकी जस्तो देखिन्छ, तपाई कुनै फरक वा उज्यालो देख्न सक्नुहुन्न। अरु के छ त, एक वा दुई स्थानमा मात्र केन्द्रित हुन सक्दैन किनकि डेल्टाले वास्तवमा देशको सम्पूर्ण पश्चिमी क्षेत्र ओगटेको छ।
मेरो अर्थ, यो ठूलो छ के केहि पर्यटन एजेन्सीहरु सँगै राखिएको छaपर्यटक मार्ग डलर र यूरो पर्यटन को फाइदा लिन। पैसा जुन सबै जना चाहन्छ। र तपाई जुनसुकै भ्रमण छनौट गर्नुहुन्छ, निश्चित रूपले उही नै मार्गहरू होईन भने निश्चित नै गरी सक्नुहुनेछ: डु boat्गा सवारी, एउटा मन्दिरको भ्रमण, रंगीन बजार। वास्तविकता फराकिलो र बिभिन्न छ: तिनीहरू सहरहरू र माछा मार्ने गाउँहरू हुन् जुन तपाईंले समुद्रको किनारमा देख्न सक्नुहुन्छ वा तपाईंले अर्को दिन ब्याकप्याकिंग गरिरहनु भएको थियो।
तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि डेल्टा सानो क्षेत्र होइन जुन तपाईं भियतनाममा अन्य गन्तव्यहरू जस्तै दुई दिनमा भ्रमण गर्नुहुन्छ। यदि तपाईं उहाँलाई वास्तवमै जान्न चाहानुहुन्छ भने योजना आवश्यक छ र अझैसम्म यो सबै कुरा भ्रमण गर्न असम्भव छ र तपाईं केवल सबैभन्दा पर्यटन गन्तव्यहरूको भ्रमण गर्नुहुनेछ। अधिक हेर्न र गहिरो जानको लागि त्यसपछि एक निजी र विशेष गाइड भाडामा लिनुहोस्। त्याे भनेपछि, तपाईं डेल्टामा के गर्न सक्नुहुन्छ?
पहिले तपाईं सुरू गर्न सक्नुहुन्छ डेल्टाको मुटु कि क्यान थो शहर हो। यो क्षेत्र को यातायात, राजनैतिक र वाणिज्यिक केन्द्र हो र एक सुन्दर तटीय क्षेत्र, सडक र बुउलेभर्ड्स को अन्वेषण गर्न छ। हिड्न जानको लागि यो उत्तम आधार हो। त्यसो भए तपाईले जानु पर्ने हुन्छ कै रंग फ्लोटिंग मार्केट, सुन्दरता फु क्वोक टापु, पहाड साम वा बेन ट्रे।
त्यहाँ एक राम्रो छ चरा अभयारण्य, ट्रा सु, त्यहाँ पनि छ Xeo Quyt वन र बा Chuc चिहान। यो स्मारक हो जुन खमेर शासनको भयानक घटनाहरूको सम्झना गर्दछ: १ 1978 75 मा यस सरकारले तीन हजार भन्दा बढी गाउँलेहरूलाई मारे र केवल दुई जना मात्र बाँचे। स्मारकमा एक अस्पष्ट र फोटोग्राफहरू हुन्छन् र हा टियानबाट kilometers XNUMX किलोमिटर टाढा छ ताकि तपाईं एक व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ चौ डॉकबाट यात्रा करीव 30 XNUMX यूरो को लागी।
जिओ क्व्याट जंगल काओ लाहनबाट kilometers 35 किलोमिटर टाढा छ र त्यहाँ सुन्दर रूखहरू बाहेक छन् भियतनाम कंगर यो क्यानो द्वारा यात्रा गर्न सकिन्छ, वन भित्रबाट, वा ट्रेल्स द्वारा। क्यानो राइड २० मिनेटको छ र दुबैले तपाईंलाई ब bun्कर र सुरु seeहरू भियतनाम युद्धको समयदेखि नै देखाउँदछ। त्यसोभए, तपाईले देख्नुहुनेछ, मेकोong्ग डेल्टा विशाल छ र यसले समय र चाहना लिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदा, तपाई यसलाई जहिले पनि सतहमा भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ, अधिक पर्यटन पर्यटनको लागि अनुकूलित भई।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » के हेर्ने » मेकोong्ग डेल्टाको सुन्दरता पत्ता लगाउनुहोस्